Nhengo dzeMDC-T Dzodzokera muSeneti Kunopasisa Mabhiri Maviri
Zvita 06, 2010
Maseneta eMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai anoti achange ari mudare neChipiri kuitira kuti akurukure mabhiri maviri anoti reFinance nereAppropriation, kuitira kuti vatambire hwaro hwebhajeti yegore rinouya.
Kudzokera kuparamende kwemaseneta aya kunotevera kurudziro yakaitwa naVaTsvangirai. Bhajeti ra2011 rakaturwa mwedzi wapera muparamende negurukota rezvemari, VaTendai Biti.
Svondo rapera, mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, kuburikdza nemutevedzeri wemunyori weparamende, vakazivisa kuti seneti inofanirwa kugara kubva Chipiri kusvika Chishanu kuitira kuti ikurukure mabhiri anoda kupasiswa.
Nhengo dzeMDC yaVaTsvangirai dzedare reseneti dzakanga dzichivhiringidza kugara kwedare iri senzira yekuratidza kunyunyuta kwadzo nekusharwa kwakaitwa magavhuna ematunhu naVaMugabe vari voga, izvo zviri kunze kwechibvumirano cheGlobal Political Agreement.
Maghavhuna aya anogarawo zvekare mudare reseneti iri. Mukokeri wemaseneta ebato raVaTsvangirai mudare reseneti, Amai Gladys Gombami-Dube, vaudza Studio7 kuti vachapinda zvavo mudare iri asi hazvirevi kuti vave kucherechedza magavhuna aya zviri pamutemo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira, VaCharles Mutasa, vanoti danho iri rinogona kunge rasvikwa zvichitevera hurukuro dzinonzi dzakaitwa pakati pevatungamiri vehurumende nemuyananisi uye vari mutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, mwedzi wapera.
Hurukuro naAmai Gladys Gombami-Dube